Dawlada Puntland oo ku tilmaantay dilka wasiirkii warfaafinta mid argagax iyo anfariir ku riday ummadda Puntland, sheegtayna in la hayo cadaymo muujinaya ciddii ka danbaysay dilkiisa. [Akhris …] – Radio Daljir
Dawlada Puntland oo ku tilmaantay dilka wasiirkii warfaafinta mid argagax iyo anfariir ku riday ummadda Puntland, sheegtayna in la hayo cadaymo muujinaya ciddii ka danbaysay dilkiisa. [Akhris …]
Galkacyo, Aug 05 – Dawladda Puntland ayaa ku tilmaantay dilka Alle ha u naxariistee wasiirkii warfaafinta Warsame Cabdi Shirwac ?Seefta Bannaanka? mid naxdin leh, lagana xumaado, ayna gaysteen koox wax magarato ah.
Wasiirka wasaaradda caafimaad dawladda Puntland Dr. Bashiir Cali Biixi oo shacabka reer Puntland kala hadlay idaacadda Daljir ayaa sheegay in dilkaasi ay gaysteen dad diidan hormarka iyo nabadda Puntland kuwaasi oo uu carabka ku dhuftay hadda in lagu raad-joogo, isla markaana la hayo caddaymo ku aaddan cidda ay yihiin iyo halka ay ka soo jeedaan kooxdii weerarkaasi gaysatay.
Dr. Biixi waxaa uu sheegay in dawladda Puntland go?aan adag ay ka qaadatay dhacdadaasi si deg deg ahna caddaallada loo horkeeni doono dadkii falkaasi dilka ah gaystay, kuwaasi oo uu wasiirku sheegay in ay yihiin rag u soo guntaday burburinta Puntland.
Dr. Biixi waxaa uu dhammaan shacabka Puntland gaar ahaan kuwa gobolka Mudug ugu baaqay in ay illaaliyaan ammaanka iyo kala danbaynta isla markaan arrintaasi ay u daayaan gacanta dawladda oo uu sheegay in uu hubo deg deg in ay wax u qabanayso saacadaha foodda inagu soo haya.
Dr. Biixi waxaa uu dadka reer Galkacyo u soo jeediyey in ay gacan siiyaan ciidan bilayska ee ku hawlan baaritaannada la xariira dilkii maantay loo gaystay wasiirkii warfaafinta.
Sidoo kale saraakiisha ciidanka bilayska ayaa sheegay in ay hadda hayaan caddaymo wax ku ool ah oo muujinaya cidda ay yihiin kooxdii weerarkaasi gaystay, waxaana bileysku in taasi ku dareen in ay wadaan baaritaan ah halka ay ku dhuumaalaysanayaan.
Dhanka kale, M/weynaha Puntland Dr. C/rixmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa ku dhawaaqay in dib loo dhigo aaska marxuumka si loogu sameeyo aas qaran oo ay ka soo qayb galaan madaxda ugu saraysa dawladda Puntland oo uu ka mid yahay madaxweynuhu.
Illaa galabta ayaa lagu wadaa wafti ballaaran oo iskugu jira golayaasha dawladda Puntland isla markaan uu horkacayo M/weynuhu in ay soo gaaran magaalada Galkacyo si ay uga qayb galaan aaska wasiirkii warfaafinta Alla ha u naxariistee Warsame Cabdi Shirwac. Marxuumka ayaa lagu aasi doonaa qabuuraha magaalada Galkacyo.